Booqasho Indho-indheyn ah oo aan ku tagnay xarunta agoomaha Hargeysa oo duruufo adagi ku gedaamanyahiin | SDWO.COM & SomalilandNews.net
Booqasho Indho-indheyn ah oo aan ku tagnay xarunta agoomaha Hargeysa oo duruufo adagi ku gedaamanyahiin
Published on December 16, 2015 by sdwo · No Comments
Gudoomiyaha SDWO Relief Foundation Guled Cabdi Sheekhaash oo ay wehelinayeen Maxamed Cumar Maygaag iyo Xasan Waraabacade ayaa maanta booqasho qaatay dhawr saacadood ku tegay xarunta agoomaha ee magaalada Hargeysa.
Ugu horeyntiiba waxa warbixin dheer siisay agaasimaha xarunta agoomaha Hargeysa Caasha Maxamud Qaalib oo ka warbixisay heerarkii kala duwanaaa ee ay xaruntu soo martay iyo duurufaha ku gadaamaan ee dhinac walba ka haysta xarunta.
Xarunta ayaa waxa ku gadaamaan duruufo aad u adag oo dhinac kaste ay baahiyo balaadhani kajiraan, haday noqonlahayd dhinaca qalabayanta goobaha caruurtu seexato, dhinaca shaqaalaha ka hawl gala oo aad u tiro yar marka loo eego caruurta faraha badan ee ku jirta xarunta oo kor u dhaafaysa 400 oo caaruur ah oo dadoodu ay kala duwantahay iyadoo ilamha ugu yari jiro wax ka yar 40 cisho.
Xarunta ayaanay wax kaalma ah aanay ka geysan labada shirkadood ee ugu weyn dalka ee Telesom iyo Dahabshiil.
Dhinaca kale waxa wax aad loogu farxo ahaa ka dib markii aanu dhex lugeynay qaybaha kala duwan ee xarunta oo aad u balaadhan oo nagu qaatay saacad inaanu dhex socono ayaa waxanu aragnay qaybo cusub oo lagu kordhiyey xarunta oo ay dhiseen Turkiga, Iceland iyo SOS. qaybtan oo loogu talogay in lagu xareeyo caruurta aadka u dada yar ayaa si heer sare ah u qalabaysan iyadoo ka kooban 5 dhisme oo mid waliba ka koobanyahay qolal hurdo, suuliyo, kitchen iyo fadhi casri ah oo agabkii oo dhamina hoos yaalo sida sawirada ka muuqata.
Dhibaatooyinka kale ee ku gadaaman xaruntan isla markaasna aanay xukumadu waxba ka qaban ayaa ah dhalinyarada xaruntan ee jaamacadaha ka soo qalinjebisa oo aan xukuumad iyo shacbiba wax shaqo ah siinin, halkii laga filayey in xukuumadu ay wasaaradaheeda u kala qaybiso oo ay shaqooyin ka siiso, hadii ganacsigii gaarka loo lahaa shaqalaysin waayey.
Muwaadin ka qaybqaado taakulaynta agoomaha adoo nagala soo xidhiidhi kara Samafal@sdwo.com
Sedexdan dhalinyarada ah ee la Sawiran Maxamed Cumar waxay ku soo koreen oo ay ilaa hada deganyahiin xarutan agoomaha iyagoo dhamaantood ka soo qalinjebiyey jaamacada, hase yeeshee aan ilaa hada cidi shaqalaysinin